Hery Rajaonarimampianina : « Ny asa ihany no hitondra amin’ny fampandrosoana » -
AccueilRaharaham-pirenenaHery Rajaonarimampianina : « Ny asa ihany no hitondra amin’ny fampandrosoana »
26/07/2018 admintriatra Raharaham-pirenena 0
« Mitohy hatrany ary tsy misy fitsaharany ny asa fampandrosoana ny firenena. Ny asa ihany no hitondra antsika amin’ny fampandrosoana fa tsy fampanantenana poakaty ». Io no nambaran’ny Filohan’ny Repoblika, Hery Rajaonarimampianina nandritra ny lanonana fitokanana ireo fotodrafitrasa maro sosona teny Avaradrano, toa ny tsena sy CEG eny Sabotsy Namehana, ny lalana mampitohy an’i Sabotsy Namehana amin’Ambatofotsy, ny biraon’ny kaominina eny Anosy Avaratra ary ny toeram-panofanana arak’asa ny vehivavy eny Antsofinondry.
Noho izany, hoy izy, fanamby efa napetraka ny asa ary tsy hitsahatra sy tsy hijanona izany raha tsy mandroso ny firenena. “Ny asa ihany no fanambiko amin’ny mpiara-belona sy ny mpiray tanindrazana amiko. Ny fampanantenana dia afaka manao izany avokoa, na iza na iza, saingy, aleo ny vahoaka no hitsara satria rehefa misy tsy fahatanterahan’ny fampanantenana dia tonga amin’ilay teny hoe fampanantenana poakaty. Ny asa vita mantsy tsy azo foanana na totorana fa tsy maintsy hitan’ny vahoaka eny foana iny”, hoy ny Filoha.
Tafiditra indrindra amin’ny vinan’ny Fisandratana 2030, ireo fotodrafitrasa maro sosona notokanan’ny Filoham-pirenena tany amin’ny distrikan’Avaradrano ireo. Izany indrindra no nahatonga azy nanambara fa “ny Fisandratana dia miainga amin’ny hambo-po iombonana”. “Ny Fisandratan’ny firenena dia tsy natao ho an’olon-tokana na ho an’olom-bitsy fa iombonana izany, ary ny fampandrosoana hoentina dia mipaka amin’ny vahoaka”, hoy hatrany ny Filoha Hery Rajaonarimampianina.
Ankoatra izay, notsindriany ihany koa ny mahakasika ny ady amin’ny fahantrana izay mbola iainan’ny firenena 58 taona aty aoriana. “Ny rehetra no tokony miara-mivonona hiady amin’ny fahantrana. Mila mifanome tanana isika hanangana firenena matanjaka. Ny fiverenana any ifotony no tena zava-dehibe satria ny asa rehetra izay atao, na ny fampianarana na ny lalana na ny tsena, dia miverina any ifotony avokoa…”, hoy izy.
Nomarihiny ihany koa fa tsy ny fahantrana ara-toekarena ihany no mahazo ny firenena fa ny fahantrana ara-toe-tsaina ihany koa. Noho izany, hoy ny Filoha, mila manova toe-tsaina ny rehetra ahafahana miady amin’ny fahantrana, ka ahafahana mampandroso tanteraka ny firenena…